page 41 music CD
page 46 Games
Water Festival 2011
free studio လေးပါ အသံပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်
ူဒါကတော့ ဈေးအကြီးဆုံးနဲ့ လူအကြိုက်အမျာဆုံး antivirus ပါ
ဒီsoft လေးက electric သမားတွေအတွက်အထောက်ကူပြုနိုင်အောင်တည်ဆောက်နိုင်အောင်အတွက်
ဒီsoft လေးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ့ခင်ဗျား အပုံလှလှလေးတွေဆွဲချင်တဲ့သူများအတွက် သီးသန့် ရှယ်လေးပါ ။
ဒီsoftလေးက ဓာတ်ပုံတွေကိုတစုတည်းစုပြီး flash file အဖြစ်နဲ့ ပြောင်းလှဲလို့ ရအောင်ပြုလုပ်ပေးသောsoftware ဖြစ်တယ်. ကြိုက်ရင်သုံကြည့်ပါ။
ဒီဟာလေးက မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ all programs ကိုခလုတ်နိပ်လိုက်တာနဲ့ ကွန်ပျူတာထည့်မှာသွင်းထားတဲ့soft
တွေကိုအလွယ်တကူပြသပေးပါလိမ့်မည်။ အသုံးတည့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီsoft လေးက ထူးထူးခြားခြားလေးပါ . image file cd vcd dvd blue ray တွေကိုပါ password protect
Kaung Kaung and Moet Moet - Min Ko Tadi Ya Yin.mp3
ဒီsoft လေးက 3D PHOTOပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုရန်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည် ။ ထူးခြားကောင်းမွန်ပါသည်။
ဒီsoft လေးက window အားလုံးအတွက် screengrab ရိုက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတဲ့softလေးပါ
အရမ်းကိုကောင်းမွန်တယ် photo မှ စာကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းယူနိုင်အောင်စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဒီကောင်းလေက chatting သမားတွေအတွက်အထူးတည်ထွင်ထားတဲ့အရာလေးပါ။
Trillian™ isafully featured, stand-alone, skinnable chat client that supports AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger, and IRC
ဒီsoftလေးက hard disk ဆရာဝန်လေးပေါ့ ။သူက hard disk ကိုအထူးကောင်မွန်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးထုတ်နော်
ဒီsoft လေးက studio အသံပိုင်ကိုဝါသနာပါသူတွေအတွက်သီးသန့် ပါ။
ဒီsoftလေးက အားလုံးကြားဖူးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူကစာပေ၊စာအုပ်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်သုံးပြုလို့ ရတဲ့ soft လေးပါ။ သူကpdf .doc. နဲ့ ပတ်သက်ပြီးအမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလှဲလို့ ရအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။မိမိကွန်ပြူတာထဲမှာ printer တစ်လုံးထည့်ထားပြုသုံးသလို့ ။print လှဲထုတ်ပေးတယ်။ http://hotfile.com/dl/97758654/ec55f9c/UniversaDocument.Converter.5.1.zip.html
ဒီကောင်လေးက စီးပွားရေအတွက်သုံပြုဖို့ လိပ်စာကဒ် software ပါ
ဒီကောင်လေးက ဂီတသမားတွေအတွက်အသုံပြုဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့soft လေးပါ ။
ဒီsoftလေးက virus scanner နှင့်ကွန်ပျုတာကိုသန့် ရှင်းရေးလုပ်ပေးတဲ့အရာလေးပါ။ထူးခြားကောင်းမွန်ပါတယ်
လင့်က window x64bit ကအ ပေါ်လင့်ပါ။ widow32xbitအတွက်ကအောက်လင့်ပါ။